Mpivarotra manodidina ny 1.500 ka hatramin’ny 2.000 isa no kasaina hahazo toerana ao. Ireo mpivarotra efa teo aloha ihany toy ireo manana karatra ara-dalàna sy nahaloa haban-tsena ara-dalàna raha ny nambaran’Andrianjakarivony Manitra, lefitra voalohan’ny Ben’ny tanànan’Ivato no hisitraka izany. Tsy mitombina velively ny filazana fa hananganana toeram-pivarotana solika lehibe ao. Nomarihiny fa betsaka ireo Ben’ny tanàna nikasa ny hanamboatra ny tsenan’Ivato saingy Randrianarisoa Penjy, Ben’ny tanàna amin’izao ihany no nahavita. Niainga avy tamin’ny filan’ny mponina avokoa raha ny nambarany no nahafahan’izy ireo nanangana ireny fotodrafitrasa ireny, amin’ny alalan’ny fandraisana ny olona rehetra tsy an-kanavaka manan-kevitra hampandroso ny tanàna.